်စွန့် ပစ်ရည် : အခြေခံ အချက်များ
စွန့် ပစ်ရည် နှင့် ဖို့ မြေဓာတ်ငွေ့ တို့ သည် ဇီဝဒြပ်များ ပုပ်သိုး ဆွေးမြည့်ခြင်း ဟူသော အလားတူ အရင်းအမြစ်မှ ဆင်းသက်လာသည်။
ကုမ္မဏီများသည် ဖို့ မြေဓာတ်ငွေ့ ပြသာနာဖြေရှင်းနည်းများကို ပေးသကဲ့သို့ စွန့် ပစ်ရည် ပြသာနာဖြေရှင်းနည်းကိုလဲ ပေးသည်။ ဖို့ မြေနေရာတခုမှ အငွေ့ နှင့် အရည် အညစ်အကြေး များ ပြိုင်တူဖြစ်နေသောသဘာဝအခြေအနေသည် တကယ့်ကွာခြားချက်များကို ဖုံးကွယ်ထားသည်။
ဖို့ မြေဓာတ်ငွေ့ ပြသာနာအတွက် သင့်တော်သောဖြေရှည်းနည်းများကို ဖန်တီးနိုင်ရန် မီသိန်းပြင်းအားနှင့် ပါဝင်သော ဓာတ်ငွေ့ ပမာဏကို သိရှိရန်လိုအပ်ပါသည်။ ထိုအချက်အလက်များကို ကျင်းပေါက်များစောင့်ကြည့်စစ်ဆေးခြင်း နှင့် ပို့ လွှတ် စမ်းသပ်စစ်ဆေးခြင်း တို့ မှရရှိနိုင်ပါသည်။
စွန့် ပစ်ရည် နှင့် နှိုင်းယဉ်ရန် အောက်ပါအချက်များကိုသိရန်လိုအပ်ပါသည်။
1. သန့် စင်မှုလိုအပ်သော ခန့် မှန်းထုတ်လွှတ်မှုနှုန်း
2. အရင်းအမြစ်တွင် စွန့် ပစ်ရည်ပါဝင်မှု အချိုးအစား
3. အာဏာပိုင်အဖွဲ့ အစည်းက ပြဌာန်းထားသော စွန့် ပစ်ပစ္စည်းပါဝင်မှုအချိုးအစား
ထိုအချက်အလက်မှ စွန့်ပစ်ပစ္စည်းသဘောတူညီချက် နှင့် နည်းပညာကိုက်ညီရန် ရွှေးချယ်နိုင်သည်။ ခန့် မှန်းခြေ အကြမ်းဖြင်းအားဖြင့် စွန့် ပစ်ရည်သန့် စင်စနစ်အတွက် နည်းပညာ 20 ရှိပါသည်။
ထိုအများထဲမှ တခုခြင်းစီကို အခြား စံချိန်စံညွှန်း ဓာတုစက်မှု ယူနစ်များဖြင့် အမျိုးမျိုးပေါင်းစပ် လည်ပတ်ခြင်းဖြင့် အရည်အသွေး နှင့် ငွေကြေးကုန်ကျမှု မျှခြေကို အကောင်းဆုံးဖြစ်စေမည့် စက်မှုနည်းပညာအဖြေတခုရရှိနိုင်ရန် လုံလောက်များပြားသော ရွှေးချယ်စရာများကို ပံ့ပိုးနိုင်ပါသည်။
စွန့် ပစ်ရည် ထုတ်လွှတ်နှုန်းခန့် မှန်းခြေသည် စွန့် ပစ်ရည်သန့် စင်စနစ် ဖွဲ့ စည်းတပ်ဆင်ခြင်း၏ ရည်မှန်းချက်အတိုင်းအတာပေါ်တွင် မူတည်သည်။ နေရာတခုမှထွက်လာသော ခြားနားသောစွန့် ပစ်ရည်ကို ကြားဖြတ်ပြီးသန့် စင်လုပ်ဆောင်ရန် နှုန်း ကိုအဆင်သင့်ရရှိနိုင်ပါသည်။ စဉ်းစားဖွယ်ရာဖို့ မြေ၏ စွန့် ပစ်ရည်ဖြစ်နိုင်ခြေများကိုထိန်းချုပ်ရန် နှင့် ပင်ရင်းမှ စွန့် ပစ်ရည်များကို စီမံဖယ်ထုတ်နိုင်ရန် ရေအဝင်အထွက်လေ့လာမှု ပြုလုပ်ရန်လိုအပ်ပါသည်။
စွန့် ပစ်ရည် ထုတ်လွှတ်နှုန်းသည် နေရာသို့ ရေအဝင်အတိုင်းအတာပေါ်တွင် များစွာမှီခိုပါသည်၊ ဖို့ မြေဓာတ်ငွေ့ ကဲ့သို့ ဇီဝလှုပ်ရှားမှုဖြစ်စဉ်ပေါ်တွင် များစွာမမှီခီုပါ။ ရေအဝင်သည် မိုးရေ၊ မြေအောက်ရေ အပြင် ဇီဝလှုပ်ရှားမှုဖြစ်စဉ်မှလည်း ရရှိပါသည်။
ယုံကြည်ရသော စွန့် ပစ်ရည် ထုတ်လုပ်မှုနှုန်းခန့် မှန်းခြေကို ရရှိရန်မှာ-ကျွမ်းကျင်သော Hydro-geologist တစ်ဦးလိုအပ်သော လုံလောက်သောကန့် သတ်ထိန်းချုပ်မှုမရှိလျှင် ဖို့ မြေဓာတ်ငွေ့ ထုတ်လွှတ်မှုနှုန်းကိုခန့် မှန်းရခြင်းထက် ပိုမိုခက်ခဲပါသည်။ ကွင်းဆင်းလေ့လာခြင်းပြီးနောက် ပန့် စမ်းသပ်စစ်ဆေးခြင်းများ ပါဝင်နိုင်ပါသည်။
ယေဘုယျစွန့် ပစ်ရည်တွင်ပါဝင်သောပစ္စည်းများကို ထို့ ကဲ့ သို့ စမ်းသပ်စစ်ဆေးနေစဉ် စောင့်ကြည့်မှတ်သားနိုင်သည်၊ အခြေခံစိစစ်ချက်အနေဖြင့်လည်း သုံးနိုင်သည်။ နမူနာများကို အကောင်းဆုံးထုံးစံအလေ့အထများနှင့်အညီ သင့်တော်သောဓာတ်ခွဲခန်းတွင် စိစစ်ပါသည်။
စွန့် ပစ်ရည် မည်မျှအတိုင်းအတာအထိသန့် စင်ရမည်ကို သဘောတူညီထားသော စွန့် ပစ်ရမည့်ပမာဏပေါ်မူတည်ပြီး ဆုံးဖြတ်ရသည်။ ထို့ ကဲ့သို့ သဘောတူညီချက်ကို မြေအောက်ရေသို့ စွန့် ပစ်နိုင်ရန် သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်အေဂျင်စီ မှလည်းကောင်း ရေဆိုးပိုက်သို့ စွန့် ပစ်နိုင်ရန် ဒေသခံ ရေ ကုမ္မဏီ မှလည်းကောင်း ရယူနိုင်သည်။ တချို့ အခြေအနေများတွင် တခြားအာဏာပိုင်အဖွဲ့ အစည်းများလဲရှိနိုင်သည်။
စက်မှုဓာတုစိစစ်မှုများမပြုလုပ်မှီ သန့် စင်မှုလုပ်ငန်းစဉ်၏ အထူးရည်ရွှယ်ချက်များကို သိရှိထားရန် အရေးကြီးပါသည်၊ စွန့် ပစ်နိုင်ရန်သဘောတူညီချက်များကို သန့် စင်စက်ရုံ မဆောက်လုပ်မှီ သဘောတူညီထားရန် မုချလိုအပ်ပါသည်။
လောင်ကျွမ်းခြင်းကိုနေရာတကာမှာအသုံးပြုနိုင်သော ဖို့ မြေဓာတ်ငွေ့ နှင့်မတူသည်မှာ နည်းပညာများသည် သန့် စင်ရန် ရည်မှန်းချက်ပန်းတိုင်ပေါ် တိုက်ရိုက်မူတည်နေပါသည်။ ဆောက်လုပ်ခြင်း သို့အစီအစဉ်လမ်းကြောင်းပြောင်းသွားလျှင် ကွဲပြားခြားနားသော သန့် စင်ရန်နည်းလမ်းလိုအပ်ပါလိမ့်မည်၊ အဆိုပြုထားသောစက်ရုံတွင် အကြီးစားပြောင်းလဲမှုဖြစ်နိုင်ပါသည်။
သန့် စင်ရန်နည်းလမ်းများနှင့်ပတ်သတ်ပြီး ထပ်မံသိလိုလျှင် ထုတ်ကုန်အညွှန်း ထဲက စွန့် ပစ်ရည် (သို့ ) အထက်ပါလင့် Organics မှထောက်ပံသော သန့် စင်ရန်နည်းလမ်းများတွင် ကြည့် ရူနိုင်ပါသည်။ထိုအရာများသည် နှိုင်းယဉ်စရာ စက်ရုံအရင်းအနှီးနှင့် လည်ပတ်စရိတ်များစသည့် အရေးကြီးသော ရူထောင့်များ နှင့် သန့် စင်စနစ်နှင့် ပါဝင်သောနည်းပညာ အတွက် အခြေခံဖော်ပြချက်သဘောတရား ရွေးချယ်စရာများကို ထောက်ပံပေးသည်။